Companiesရာမကုမ္ပဏီများသည်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ Eurasia မီးရထားပြပွဲတွင်တွေ့ဆုံကြသည် RayHaber | raillynews
[13 / 02 / 2020] ဒီဇင်ဘာလတွင် Istanbul Metro သည်ခရီးသည် ၆၅ သန်း ၂၀၀ သိန်းအားသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[13 / 02 / 2020] TÜVASAŞတွင် ၂၄ လကြာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိသည့်လျော်ကြေးလျော်ကြေးငွေအတွက်သတိပေးချက်	54 Sakarya
[13 / 02 / 2020] RSD သည်မီးရထားစနစ်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာညီလာခံကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်	06 တူရကီ
[13 / 02 / 2020] နိုင်ငံသားများသည်သမိုင်းကြောင်းအရ Derbent ရထားဘူတာကိုလုပ်ဆောင်ရန်	41 Kocaeli
[13 / 02 / 2020] Coronavirus အိမ်တွင်းကားရေကြီးမှု TOGG ၏အစီအစဉ်များ	34 စပိန်
ပင်မစာမျက်နှာလောကအစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ရထားထဲမှာကျင်းပမည့်ဧရာမကုမ္ပဏီကြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံ
အစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ရထားထဲမှာကျင်းပမည့်ဧရာမကုမ္ပဏီကြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံ
19 / 01 / 2012 လောက, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဦးဆောင်တံခါးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာ (IFC) မှာ 08 မတ်လ 10 အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများမှဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် - ဒုတိယ Eurasia ရထားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား, အလင်းရထား, အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော 2012 ကျင်းပပါလိမ့်မည်။
ပထမဦးစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Binali Yildirim နှင့်သူ၏ပြပွဲဖွင့်ပွဲနှင့်အတူကျေးဇူးတရား၏ Undersecretary ၏န်ကြီး; TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman အတွက်တန်ဖိုးရှိသောအပေါငျးအသငျးမြားနှငျ့အတူတရားမျှတဘို့မိမိတို့ထောက်ခံကြောင်းပြသခဲ့သည်။ 8.700 m²စုစုပေါင်းဧရိယာ; 19 50 နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပါဝင်မှုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှကုမ္ပဏီများကကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်နှင့် 120 1.400 4.200 နိုင်ငံခြားသားများအပါအဝင်လူဦးကသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်း, တူရကီကျင်းပတဲ့ပြပွဲများတွင်ယခုနှစ်ပါဝင်မှု2ကြိမ်ပိုကြီးတဲ့အဖြစ်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။
တိုင်းပြည်အပေါ်ဒီနှစ်မှာတော့, ဂျာမနီ, ဗြိတိန်, ရုရှားနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအဆင်းလှသောတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်အမျိုးသားရေးပါဝင်မှုရာ 25 ယူပါလိမ့်မယ်။ TCDD, TÜVASAŞTÜLOMSAŞနှင့်TÜDEMSAŞကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထို့အပြင်အရာရှိတဦးကသင်တန်းသားများကိုနှင့်တရားမျှတသောထောက်ခံသူတွေရဲ့အနေအထားတွင်ရှိလိမ့်မည်။ 2012, Alstom အတွက်ကုန်သွယ်ရေး Mobility ကို Siemens, Hyundai Rotem ကုမ္ပဏီထံမှ, Vossloh, Plasser Theurer, Voith Turbo, Arcelor မစ်တယ်လ်, Schnieder, ZF, ထိုကဲ့သို့သောနောရ် Bremse အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီကြီးလည်းထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
ပါမောက္ခကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ဆင်းလှသောကော်မတီကစဉ်အတွင်း ဒေါက်တာ Mustafa KARAŞAHİNကသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသများအတွက်အရေးအပါဆုံးဝိုင်းစေသည်ညီလာခံနှင့်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲအစီအစဉ်များ၏ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်မည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစပီမှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဘယ်ကြောင့်သင် Fair EurasiaRail ပါဝင်ခဲ့?
ယခုနှစ် 2023 50 အတွက်ပို့ဆောင်ရေးတူရကီသမ္မတနိုင်ငံန်ကြီးဌာနရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘတ်ဂျက်မျှော်မှန်းရထားလမ်းစနစ်များများအတွက်ဘီလီယံယူရို။ 2004 90% ကတည်းကရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့၏စီးပွါးဖို့တစ်နှစ်များအတွက်ဘတ်ဂျက်ကျေးဇူးတင်စကား; လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ထွက်သယ်ဆောင်အဆိုပါစီမံကိန်းများကို210% တစ်ခုတိုးတက်မှုနှုန်းမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတူရကီအတွက်စုစုပေါင်း3ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ 20% အားဖြင့်ကြီးပွားသတည်း။
အဓိက PRODUCT သည်အုပ်စုများ
•ပြည်သူ့ Institution များ
•ဟာ့ဒ်ဝဲ & Hand Tools များထုတ်လုပ်သူများ
• Related အသင်း
•အိမ်တွင်း & နိုင်ငံတကာမီဒီယာ
•ဒေသခံ & အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ
•အင်ဂျင်နီယာ & Consulting လမ်းတံတား
•ရထားလမ်းကား & ထောက်ပံ့ကုန်လက္ကား
•လျှပ်စစ် & signal အဖွဲ့အစည်းများ
•အခြေခံအဆောက်အအုံ Institution များ
9 ။ Konya အတွက်ကျင်းပမည့်ဥရောပအာရှရထား 2021 တရားမျှတသော! .. လက်မှတ်Atıldı
ဥရောပအာရှရထား 2019 ကြေညာလိုက်သည်ကို Fair ကုမ္ပဏီပါဝင်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားလမ်းကဏ္ဍအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဥရောပအာရှအတွက် 8-10.03.2012 အတွက်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်
အဆိုပါဥရောပအာရှရထား 2013 ကုမ္ပဏီများယခုပင်လျှင်ဆိုဒ်များ booking များအတွက်
2020 ခုနှစ်တွင်တူရကီအတွက် Eskisehir အတွက်ကျင်းပမည့်ပထမဦးဆုံးနှင့်မီးရထားကုန်သွယ်ရေးရထားတစ်ခုမှာ ...
Eurasia Rail.2 Fair ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၀ န်ကြီးYıldırımသည် Fu သို့အလည်အပတ်သွားရောက်သောအခါမီးဖိုချောင်တွင်ကိုင်ထားသည်
Eurasia ရထား -၃ ။ မီးရထားလမ်း၊ ရထားလမ်းစနစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ: 3-07 ...
အဆိုပါရထားလမ်းကဏ္ဍအစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ရထားတရားမျှတသောတှငျကငျြးပခဲ့ခံရဖို့ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်
5 ။ ဥရောပအာရှရထားတရားမျှတသောအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်စတင်သည်
Xnumx'nc အစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ရထား3ဖွင့်လှစ်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရထားလမ်းပြပွဲ
ဥရောပအာရှရထားတရားမျှတသော 2012 08-10 2012 မတ်လ, အစ္စတန်ဘူလ်ပြပွဲရေးစင်တာ
TÜVASAŞဖွင့်လှစ် Eurasia ရထားတရားမျှတသောမှာရပ်။
ယူရေးရှားရထားလမ်း ၃ ။ မီးရထား၊ မီးရထားလမ်း
Hyundai Rotem ကုမ္ပဏီထံမှ
Siemens Mobility ကို
လှည်းမြို့တော် Bursa မှကျရောက်ခဲ့သလား
Marmaray ရထားဂဟေဆော်ခြင်းအခမ်းအနားမိန့်ခွန်း (ဗီဒီယို) ၏ပထမဦးဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ခုနှစ်တွင်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 1992 စက်လုပ်သမားသင်တန်း
TÜVASAŞတွင် ၂၄ လကြာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိသည့်လျော်ကြေးလျော်ကြေးငွေအတွက်သတိပေးချက်
အခမဲ့ Stroller ဝန်ဆောင်မှုကိုအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်တွင်စတင်ခဲ့သည်
Ankara ရှိလမ်းများ၊ လမ်းဘေးစင်္ကြံများနှင့်လမ်းဆုံများနှင်းများသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း
Gaziantep City Hospital နှင့် Ring Road ကို Bridge Interchange ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါမည်
နိုင်ငံသားများသည်သမိုင်းကြောင်းအရ Derbent ရထားဘူတာကိုလုပ်ဆောင်ရန်
TÜVASAŞအနေဖြင့် National Electric Train Set ကိုပြည်တွင်းအထောက်အပံ့များဖြင့်ထုတ်လုပ်လိမ့်မည်
ရွှံ့လမ်းများကို Marmara အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွင်လေ့လာထားသည်
GUNCEL ၏အမျိုးသားမော်တော်ယာဉ်ပြတိုက်၊ Gunsel အနုပညာပြတိုက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
သင့်ခွေးကိုကယ်တင်သည့် Metro Staff သို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
TÜVASAŞအလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်ဖြင့် National Electric Train Setts များကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
နယူး Renault စီအီးအိုအတွက်စံချိန်လစာ
တက်စလာ Crash အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်
ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ် TOGG Coronavirus Shock